ကင်းကွာနေတာတော့ကြာပါပြီ။ မရေးဖြစ်တာကြာခဲ့ပြီ။ တကယ်ရေးချင်ပေမယ့် ရေးရမယ့် အချက်အလက်တွေက ခေါင်းထဲမှာ ရောရင်ထဲမှာရော အပြည့်။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေဆိုတဲ့ အကြောင်း ကြောင်းတွေက ချရေးမယ့်လက်တွေကို တွန့်ဆုတ်စေခဲ့တယ်။ လူမှုရေးကိစ္စ၊ အဖွဲ့အစည်းကိစ္စ စတဲ့ ကိစ္စတွေက အင်တာနက်သုံးချိန်ရဲ့တော်တော်များများကို နေရာယူထားလိုက်တယ်။ သမိုင်း ၀င်မယ့် နေ့ရက်တွေကိုလဲ ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီသမိုင်းတွေက အကောင်းလားအဆိုးလား ဆိုတာ လက်ရှိအချိန်မှာက ပြောနိုင်ဖို့စောနေသေးတယ်ထင်တယ်။ မျှော်လင့်ချက် တခွဲသား နဲ့ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ရက်တွေလဲမနည်းတော့ဘူး။ နှစ်တွေ လတွေကြာညောင်းလာခဲ့တယ်။ စိတ်တွေလဲ အိုဟောင်းလာခဲ့တယ်။ မနေ့ကစိတ်ကူးတွေဟာ နောက်တနေ့မျက်နှာသစ်ချိန် အထိဆွဲဖြန့် ပြစလို့မရတော့အောင်သေးကွေးလေးလံနေခဲ့ပြီ။
ကဗျာစပ်တောင်စကားလုံးကောင်းကောင်းတလုံးထွက်မကျနိုင်တော့တဲ့ ဦးနှောက်ထဲက အမှိုက်တွေတင်းကြမ်းထိုးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှိုင်းတိုက်။ စရိုက်ဆိုးတွေဖယ်ထုတ်ရင်း ဖြုတ်ထုတ်သတ် လမ်းစဉ် ကိုအမှတ်ရမိတယ်။ သစ္စာရှိတယ်ဆိုတဲ့ နောက်ကျောကဓါးနဲ့ထိုးခံဖူးတော့ ကျေးဇူးရှိမှ ကျေးစွတ်တတ်တဲ့ လူတွေရဲ့အကျင့်ကို ကိုယ့်စိတ်နဲ့ဘဲကိုယ်ပြန်တိုင်းပြီး မရိုင်းရအောင်နေခဲ့တယ်။ ဘာဘဲ လုပ် လုပ်ကိုယ့် အကျိုးစီးပွား တခုထဲကို မကြည့်ခဲ့ရပေမယ့် စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် စိတ်ဓါတ်ကျစေတဲ့ အချို့ကြောင့် နေ့စဉ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ ညစ်ညမ်းနေခဲ့ရပြန်တယ်။
ဘယ်လိုဘဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ သံယောဇဉ်က တကြောင်းမထောက်တကြောင်းထောက်နဲ့ ၀န်ထုတ်ဝန်ပိုးတခုကို over wight ဖြစ်အောင်ထမ်းထားနေဆဲဘဲ။ သင်ကောင်းလျှင်ကျွန်ုပ်မဆိုးပါဆိုတာ ရေးပြမှ နားလည်တတ်မှာတဲ့လား။ သံသယစိတ်တွေ ၀န်တိုမနာလိုမှု အမိန်မနာခံတတ်မှုတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာသူတွေအတွက် ခွေးကြီးမှ လက်ပေးသင်ရသလို အရိပ်ပြလဲအကောင်မထင် အဆိုးမြင်ဝါဒနဲ့ဆက်သွား အဲဒါကို မိတ်ဆွေတွေလို့ခေါ်ကြဦးမလား။
ရှဉ့်လဲလျောက်သာ ပျားလဲစွဲသာတဲ့ မြွေမသေတုတ်မကျိုး အမျိုးမျိုးရပ်တည်ခဲ့ပြီးပြီ ခုထိတော့ ကျွဲပါးဆောင်းတီးနေရတုန်းဘဲ။
Labels: အတွေးအမြင် ရေးချင်ရာရေး
BarCamp Yangon is great!
the first day on BarcampBKK4
I'll be attend to Bangkok Barcamp4
Barcamp Yangon T-shirt will be this design!
Barcamp Yangon website now launching